ရေကာတာ ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၁၃၁ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး အနည်းဆုံး ၂၆ ဦး သေဆုံးကြောင်း - Yangon Media Group
ရေကာတာ ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၁၃၁ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး အနည်းဆုံး ၂၆ ဦး သေဆုံးကြောင်း
ဗီယန်ကျင်း၊ ဇူလိုင် ၂၆
လာအိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ ရေကာတာတစ်ခုကျိုးပေါက်ခဲ့အပြီး နှစ်ရက်ခန့်အကြာ၌ လူပေါင်းအနည်းဆုံး ၂၆ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၃၁ ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း လာအိုဝန်ကြီးချုပ်က ဇူလိုင် ၂၅ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်သိုသိပ်သော ကွန် မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်သည် ရှားရှားပါးပါးရုပ်သံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပျောက်ဆုံးသူများအရေအတွက်အား အတိအကျပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စော စောပိုင်းအစိုးရ၏ တရားဝင်အစီ ရင်ခံစာများ၌ Attapeu ဒေသ၌ လူပေါင်းရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ရေကာတာကျိုးပေါက်မှုမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများက ၎င်းတို့ယခုကဲ့သို့ ဆည်ပေါက်မည့်အကြောင်း အဘယ်ကြောင့်လုံ လောက်သော သတိပေးမှုမရရှိခဲ့သနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၂၅ ရက် နေ့လယ်ခင်းအထိ လူပေါင်း ၃ဝဝဝ ခန့်အား ကူညီကယ်ဆယ်ရေးများလုပ် ဆောင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး လူများမှာ သစ်ပင်များ၊ အိမ်အမိုးများ၌ မှီတွယ်နေနေရကြောင်း ဗီယန်ကျင်းသတင်းစာက ရေးသားခဲ့သည်။ ယခုတာတမံကျိုးပေါက်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ စတင်ထွက်ပေါ်လာနေပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများက ယခုတမံမကျိုးမီ နာရီအနည်းငယ်အလိုမှ နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရန် သတိ ပေးချက်ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
”ဖြစ်သွားတာ အရမ်းမြန်တယ်။ ပြင်ဆင်ချိန်နည်းနည်းပဲရခဲ့တယ်”ဟု အသက်(၆၈)နှစ်အရွယ် Ban Hin Lath က AFP သို့ ဖြေ ကြားခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့ အိမ်တွေအားလုံး ရေအောက် ရောက်ကုန်ပြီ။ ကျွန်တော့်မိသားစု ဝင်လေးဦးလည်း ပျောက်ဆုံးနေတုန်းပဲ။ သူတို့သေလား၊ ရှင်လား အခုထိမသိရသေးဘူး”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တရုတ်ရှိ အမေရိကန်သံရုံး အပြင်ဘက်၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ဗုံးဟုဖြစ်ဖွယ်ရှိဟု သံရုံး ဆို
စဉ့်ကူးမြို့နယ်ရှိ ရွှေသတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် အတွင်း အင်းပြိုကျမှုတွင် ပိတ်မိခဲ့သူ ??
အကောင်ရေ ပေါက်ပွားမှုနှုန်း မြင့်တက်မှုကြောင့် လှော်ကားဥယျာဉ်ရှိ မျောက်ကောင်ရေ တစ်ထောင်ကျော?
နောက်ခံလူ ဘိုင်လီ ခွဲစိတ်မှု ခံယူရနိုင်ကြောင်း မော်ရင်ဟို ပြောကြား
မူဆယ်တွင် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာ ရရှိသူများအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း အဆို ကန့်က?
ကမ္ဘာ့ဖလား သတင်း ဒိုင်ယာရီ
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် နယ်မြေမှ ဆိုင်ခန်းခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရခြင်းမှာ အမှိုက်ပြဿနာဖြေ??